Henninger Media Services သည် Virtual Interactive Presence (VIP) ကိုစတင်ခဲ့သည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Henninger မီဒီယာန်ဆောင်မှုများရဲ့ Virtual Interactive မှရောက်ရှိခြင်း (VIP) လွှတ်တင်!
Henninger မီဒီယာန်ဆောင်မှုများရဲ့ Virtual Interactive မှရောက်ရှိခြင်း (VIP) လွှတ်တင်!
ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှသင်၏ client ကိုနှင့်အယ်ဒီတာအကြားရီးရဲလ်အချိန်အပြန်အလှန်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီတဲ့အယူအဆပါ! Henninger မီဒီယာန်ဆောင်မှုများဟာအလယ်အလတ်အတ္တလန္တိတ်ဒေသအတွက်ဗီဒီယို post ကိုထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်, သူတို့အကောင်းဆုံး "အကွာအဝေးအဘယ်သူမျှမန့်သတ်ချက်" အဖွစျဖျောပွနိုငျတဲ့ service ကိုစတင်ပါပြီ။ အဆိုပါ virtual Interactive မှရောက်ရှိခြင်း (VIP) စနစ်ကပိုကောင်းတဲ့အပေါငျးတို့သလက်ခံရရှိနှင့်ပို့စ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှဆက်သွယ်ရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်ကို client-ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးဖို့ကို download လုပ်ပါ server- လုံခြုံတဲ့ ftp ဖို့အပ်လုဒ်ကို process ကိုဖယ်ရှားပေးကြောင်းဖြေရှင်းချက်န်းကျင်ပေးခြင်းဖြင့် client ကိုမှအယ်ဒီတာထံမှပူးပေါင်းသံသရာအတွက်နှောင့်နှေးဖယ်ရှားပေးပါသည်။ အဆိုပါ VIP system ကို monitor- အကြောင်းအရာတစ်ခု user name နဲ့ password ကို-လုံခြုံအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကနေတဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ client ကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်ကြည့်ရှုသည့်ဖောက်သည်ချိန်ညှိထားတဲ့စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်!
"ဘာကိုအခြားဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ကင်း VIP သတ်မှတ် full-frame ကိုဖော်ပြရန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည် HD ကောင်းစွာ 1080 စက္ကန့်အောက်မှာအောင်းနေချိန်ကြိမ်နှင့်အတူ 59.94i / 1080 နှင့် 23.976p / 10 ဘောင်နှုန်းထားများနှစ်ဦးစလုံးမှာ signal ကို။ " Henninger ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်, ဆမ်ခရောတှငျဆှေးနှေး
အဆိုပါ Henninger ရဲ့ VIP စနစ်အားလောလောဆယ်တွင်တစ်ဝက် Yard Productions, Bethesda, Maryland ကအခြေစိုက်အဖြစ်မှန်များနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဖို့တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရပေးနေပါသည်! "ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအတူတက်လာ Henninger နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ Henninger ကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာတင်ပြသည့်အခါကြှနျုပျတို့သညျ ", အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြ ကင်မရွန်လူငယ်တို့, Post ကိုထုတ်လုပ်မှု & နည်းပညာစစ်ဆင်ရေး၏တစ်ဝက် Yard ရဲ့ Manager ကဆက်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့ VIP နှင့်အတူစမ်းသပ်စတင်ပြီးတာနဲ့ငါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ထံမှမျှော်လင့်ထားမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများထိန်းသိမ်းနေစဉ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်ကိုခဲ့ကြသည်သိတယ်။ " အဆိုပါ Henninger VIP စနစ်ကရုံခန်းမဆင်းသူတို့ရဲ့အစုံတဦးအတွက်တစ်ဝက် Yard ထုတ်လုပ်သူများအရောင်ဆုံးမခြင်းအဖြစ်အသံရောနှောကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခွင့်ပြု; သူတို့က Henninger colorist ကဲ့သို့တူညီသောခန်းထဲမှာထိုင်နေကြတယ်သော်လည်းအဖြစ်ချောမွေ့စွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်ဆင်း၏။
Henninger အားဖြင့် VIP စနစ်ကထိုကဲ့သို့သောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတည်ပြုအယ်ဒီတာအဖွဲ့, အရောင် correction နှင့်စတီရီယိုအသံရောနှောအစည်းအဝေးများအဖြစ်အများအပြား application များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို surround sound စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏ဧရိယာ၌ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆက်လက်အဖြစ်, မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်ဖို့ပါ! "ဟုအဆိုပါ VIP စနစ်၏ဆုံးစံပြ configuration ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံဟာ့ဒ်ဝဲကို install နှင့်အတူဖြစ်သွားမှာချိန်ညှိနေသည် ဂြိုဟ်တု ရှည်လျားသော-form ကိုစီမံကိန်းများနှင့်ရေရှည် Multi-ဇာတ်လမ်းတွဲအစီအစဉ်များအတွက်တည်နေရာ, " ခရော commented ။ "ကျနော်တို့သို့သော် client ကဲ့သို့ကောင်းစွာရိုးရာ suite ကိုအတွက်ဖြစ်မယ့်အရာအတွက်အခွအေနရှိကွောငျးကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ "
Henninger မီဒီယာန်ဆောင်မှုများသင်နှင့်သင့်စီမံကိနျးအတှကျအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည် checkout ရန်သေချာစေပါ! Henninger မီဒီယာန်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်မှုကို Post-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းကနေအထိ! : ပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကယ်တော့ကိုသွားပါ finding- များအတွက် www.henninger.com/
ရော့ Henninger အားဖြင့် 1983 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, HMS ဝါရှင်တန်ဒီစီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ်ထုတ်လုပ်မှုမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှတဆင့်၎င်းတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုကယ်နှုတ်တော်မူကူညီပေးနေထံအပ်နှံပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားဖောက်သည်စာရင်းထုတ်လွှင့်, ကော်ပိုရိတ်, ကြော်ငြာ, non-profit, နှင့်အစိုးရ clients များ (ကျွန်ုပ်တို့သည် GSA အတွက်ဇယားအပေါ်ဖြစ်ကြသည်) တို့ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ 25 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုများအတွက် DC ကဧရိယာထဲမှာအအောင်မြင်ဆုံးထုတ်လွှင့်, ကော်ပိုရိတ်များနှင့်မီဒီယာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချ Outsourcing မီဒီယာန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ရပြီ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါးခု core ကိုvaluesâ€ "အရည်အသွေး, ဝန်ဆောင်မှု, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, လုပ်လုပ်ခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်များကမောင်းထုတ်, နှင့်တီထွင်ဖန်တီး။ အရည်အသွေးအတွက်အကောင်းဆုံးâ€ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခဲ့သော်လည်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကကတိကဝတ်များနှင့်အပျနှံနှင့်သင်၏စီမံကိန်းကိုဆက်ဆံပါ, ကြှနျုပျတို့တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်ရရှိထားသူသောထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများအတွက်သဘောကျ။ ကျနော်တို့ထက်သာလွန်တန်ဖိုးကိုမကယ်မလွှတ်နှင့်သင့်မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်နိုင်ဖို့အတွက်တင်းကြပ်အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စံလည်ပတ်မှုလုပျထုံးလုပျနညျးလိုက်နာ။ ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးâ€ "ကျနော်တို့ DC ကဧရိယာထဲမှာအများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းကဦးဆောင်သင့်ရဲ့ပရောဂျက်တိုင်းအဆင့်တွင်ထူးခြားသော client ကို service ကိုနှင့်စပ်ရာမရှိသောဆက်သွယ်ရေး, ပေးကြိုးစားကြသည်။ တစ်ဦးမမေ့နိုင်သော client ကိုအတှေ့အကွုံအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသင်တံခါးဝ၌လမ်းလျှောက်အခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါသည် #1 ရည်မှန်းချက်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအကောင်းဆုံးâ€ "ကျနော်တို့အများဆုံးပြည့်စုံစွမ်းရည်နှင့်အလယ်အလတ်အတ္တလန္တိတ်ဧရိယာ၌အကြီးမြတ်ဆုံးစွမ်းရည်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, နောက်ဆုံးသောဆယ်နှစ်မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျထုတ်လုပ်မှုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ၏ရှေ့တန်းမှမှာခဲ့ကြပြီ။ လုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးâကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအောင်မြင်မှုကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး "€။ ကျွန်တော်တို့သည်အဖွဲ့အယူအဆ, သင်တန်းနှင့်ယုံကြည်သူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖန်တီးမှုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အခွက်တဆယ်ကိုသာဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်ကိုဆက်ထိန်းထားငှားရမ်းဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူ။ တီထွင်ဖန်တီးအတွက်အကောင်းဆုံးâ€နှစ်ခုအမျိုးသားရေးသူဟာ Emmy ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံများအတွက်အပါအဝင် "ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာachievementâ€များအတွက်မူရင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်နောက်ဆုံးသခငျစက်မှုလုပ်ငန်းဆုရာပေါင်းများစွာအဖြစ်အများအပြားပိုပြီးအနိုင်ရပါပြီ" ။
အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat နှင့်အတူအောင်မြင်မှုများနည်းပညာများပေါ်တွင်မိနစ်သတင်းအချက်အလက်ရန်သင့်ဖွင့်အားလုံးအတှကျ "ဟုသိမှာ" နေဖို့ရန်သေချာစေပါ!
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု 2014-05-28
ယခင်: Cine ဂီယာ 2014 မှာ Display ကိုပေါ်ဆန်းသစ် Lighting, ပါဝါနှင့်ကင်မရာပံ့ပိုးမှုဖြေရှင်းနည်းများ
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့် System Engineer: အဆင့်မြင့်နည်းပညာ - AMC ကွန်ယက် - Bethpage, နယူးယော့